Abathengisi beentambo ze-tebles, abavelisi beKhrimu yoMbane kunye nabaPheli boMbhobho wePPP | Shingfong
Yasekwa ngo-1996, iShingfong umenzi wobungcali kwi-PVC Trunking, i-PVC Conduit, imibhobho ye-PPR kunye nokufakwa
Umthamo we-R & D
I-PVC ye-Arc ye-Arc
I-PVC Square Coruch
I-PVC ye-PVC yeShiding
I-PVC ye-PVC ye-PVC
I-PVC Trapezoid Tranking
Imibhobho yamanzi eshushu kunye ebandayo
I-PVC kunye ne-PRP impahla
Imeko yoMbane wePVC
I-PVC ikhutshiwe i-PVC
I-PVC Pripeble Pipe
I-pvc ebandayo egudileyo
Umenzi wobungcali be
I-PVC Tring Cornking, i-PVC Coumetit, iPple, izixhobo.
Zizinto ezincinci ezenza umahluko
I-PVC Tring& I-PVC courtit
Eyona nto iphambili kwi-PVC ye-PVC yoMvelisi weTrinking Mveliso
I-Shingfong eyona ilungileyo ye-PVC ye-PVC yomenzi weTrinking Prounking Prounking Prounking Prounking Protherm, i-Shingfong inee-4PCs ze-COKLIFIft, siyakwazi ukulayisha izikhongozeli ezi-5 x 40HQ ngosuku olunye.Abavelisi be-pvc ye-pvc.Kwenziwe ngokungqongqo ngokungqinelana neemfuno zemigangatho esemgangathweni yehlabathi, kwaye umgangatho wayo unokuqinisekiswa kuba udlulile kuqinisekiso lomgangatho.Uluhlu lwe-Pvbfong's PVC ye-PVC ye-PVC ye-PVC sisisombululo esifanelekileyo sokufakelwa kwe-Cable ye-Cable, kubandakanya ukufaka impahla yasekhaya nezamakhaya. Ukunamathela kubuhlazo lwe-Foam Tahend ifumaneka ngokufumana indawo engafunekiyo nengalinganiyo. Inikezelwa kubungakanani obungaphezu kwe-200 ezahlukeneyo kunye nobungqingqwa. Ziyafumaneka ngoluhlu lwezixhobo kunye nezixhobo. Sebenzisa le nkozo, ukongeza, kuyacetyiswa ukuba usebenzise isikhafu kunye nokuncamathisela iiplagi zodonga kwizicelo ezithile.
Intro ukuya kwi-wholesale pvc ebandayo egudileyo ye-ping enexabiso elifanelekileyo
I-Shingfong Intro ukuya kwi-Wing-PVC ye-PVC eQhelekileyo yeXesha eliPhakathi enamaxabiso amahle, i-Shingfong ineeseti ezingama-30 ze-Twin Scow Scoper Scrider Prodcution Storeccider Progracul SpriderFumana i-pvc ebandayo ye-PVC I-Wholedale PVC ebandayo egudileyo yombhobho, siye sakhethekileyo kwimibhobho yamanzi eshushu kunye ebandayo, jonga ngoku!
Inqanaba eliphezulu le-PVC ye-PVC ye-PVC ye-PVC ye-Wipe i-Ontersdale - I-Suhui ShingFong Imveliso yeFowuni Com., Ltd.
I-SHIGFFOng Inqanaba eliphezulu le-PVC ye-PVC ye-PVC ye-PVC ye-Wipe I-Wieledale - I-ShingFong yePhambili yePhambili yePhambili CO., Ltd., i-WHDF. I-10x10mm ukuya kwi-200X100mm. Ngaphezulu kwe-200pcs ubungakanani obukhulu kunye nobungqingqwa.I-PVC yendawo yePVC
I-China yeyona iphambili i-pvc arc i-arc i-arcking ferking abavelisi befektri-shingfong
I-Shingfong China Eclic Ect PvC ARCK ARCORK ARTSBuza kwi-Intanethi! I-PVC ye-PVC ye-Arc ye-Arc ye-Arc ye-Arc, iinkcukacha malunga ne-PVC ye-Arc Pronking, eyona i-PVC ye-PVC ye-PVC nguMveliso wePhambili ye-Shingfong
Abavelisi be-ARC efikayo kwi-China
Abavelisi be-Arc Groove ye-ARC abavela eTshayina, i-Shingfong igubungela indawo engama-25,000 M², iqulethe izityalo ezi-2, ezi-3 kunye nesakhiwo seofisi.Ingcaciso yeMveliso 1) Izixhobo: I-PVC. 2) Umgangatho wovavanyo: En 61357: 2007. 3) Ukungafiki: Umphezulu ogudileyo ngaphandle kokukraza, umbala olungileyo kunye ne-glossy, ukupakisha inyani. I-4) Sebenzisa: I-wiring yangaphakathi, ukukhusela ucingo elingaphantsi kwe-1200v. 5) Isiphumo: Emva kokusebenzisa, ukudinisa ngokulula kwaye sitywina, ukufaka ngokuthembekileyo, kwaye kufanelekile ukugcina nokutshintsha kunye nokutshintsha. 6) Ixesha lobomi: Sebenzisa ubomi obuqhelekileyo kunokuya kwiminyaka engama-50. 7) Sebenzisa: Umbane okanye ulwakhiwo. Kuhle kakhulu kumgangatho kwaye kufanelekile kuyo nayiphi na indawo yoluntu, isetyenziselwe ufakelo lweentambo zefowuni, iintambo kunye neentambo zothungelwano olungaphantsi. Ukwenza ukhetho oludumileyo lweeholo zeMiboniso, iiofisi kunye nezakhiwo ezithengisayo kunye ne-Gymnasiums, ivenkile yeSebe, iivenkile ze-supermarks kunye nezinye iindawo zikawonke-wonke. Iimpawu eziphambili 1) Ubunzima: Ukuba ugobe, akunakuba lula ukwaphula. 2) Ubunzima: Ngaphantsi kobuchule boxinzelelo, ukumelana nefuthe eliphezulu. 3) Ukuchasana komlilo: I-Flame-Retidant ye-PVC, jika kakhulu - ibuyise kakhulu, ngokukhawuleza. I-4) Ukunganyangeki kwe-Prerosion: umswakama, i-Acid no-Alkali ukunganyangeki, ukungqinisisa iindleko zolondolozo olusezantsi kunye nobomi obude bokusebenza. 5) Ukungasebenzi: I-insulive yombane egqwesileyo, exhathisa i-25kv voltage, iqinisekisa inkqubo ekhuselekileyo. I-6) Ufakelo: Kulula ukuvula kwaye uvale, i-compon yokutyhola, ifakwe nge-cument yesamente yeSolvent kunye nentambo ye-curin.
Abavelisi be-pvc be-PVC
Abavelisi be-shingfong abavelisi be-PVC, abavelisi be-PVC ngo-1995, inamava angama-26, inamava angama-26 okuvelisa i-PVC Tring Pronking, i-PPC yendawo yePPR, izixhobo ezibandayo.I-PVC ye-PVC ye-PVC
Umzi-mveliso we-chinacking ye-china ye-PVC ngexabiso lefektri yefektri. I-Shingfong
I-Shingfong yeyona ftw ye-PVC ye-PVC ye-PVC ngexabiso lefektri ye-Adhed-Godfong, i-Shingfong ineqela eliqengqelekayo, kwaye sithumela amazwe ahlukeneyo kwi-70 eyahlukeneyo.Inkcazo 1) Izixhobo: Izinto ezintsha zePVC 2) Umgangatho: IEC 61084-2-1 3) Ukungavumi: Kulula, akukho buhlaso, ukupakisha okuhle. 4) Faka umbala: Umbala ococekileyo, akakho uxinzelelo kunye nokwaluphala. I-5) ivumba: Akukho mvumba, wokusingqongileyo. I-6) Sebenzisa: Kwi-wiring yangaphakathi, ukukhusela ucingo olungaphantsi kwe-1200v. 7) Isiphumo: Emva kokusebenzisa, ukudinisa ngokulula kwaye sityhafile, ukufaka ngokuthembekileyo, kufanelekile ukugcina nokujonga kunye nokutshintshana. 8) Ixesha lobomi: I-Shingfong Bing kwimibhobho ye-PVC kunye ne-PVC Tring i-Anti-Ukwaluphala, ukusetyenziswa kwesiqhelo kunokuya kuthi ga kwiminyaka engama-50.
I-Intro ukuya kwi-PVC ye-PVC ye-PVC ye-PVC esuka e-China Shingfong
I-Shingfong Intro ukuya kwi-PVC ye-PVC ye-PVC ye-PVC evela e-China Shingfong, i-Shingfong ineqela letalente le-R&D, inozuko lokufumana isatifikethi seSizwe seHi-trate.Ngaba ujonge umthengisi we-PVC I-Shingfong ikhethekileyo kwisiko lomzi-mveliso senze i-PVC Triketh, jonga ngoku!
Abavelisi be-PVC ye-PVC ye-PVC ye-PVC evela kwi-China
I-PVC ye-PVC ye-PVCAbavelisi be-PVC ye-PVC ye-PVC abavela kwi-China, i-Shingfong inee-4PCs ze-COKLIFIft, siyakwazi ukulayisha izikhongozeli ze-5 x 40HQ ngosuku olunye.
Umbhobho ogqwesileyo wePPR weFektri naManzi aManzi ashushu Shingfong
I-PPR elungileyo ye-PPR yePPR yePPR ebandayo neshushu, Iinkcukacha malunga nombhobho wePPR amanzi abandayo kunye ashushu
I-tube ye-wholesale yomgca ngexabiso elifanelekileyo - i-shingfong
I-Shingfong I-Tube ye-Wingfong I-Tube ityhubhu ye-Whelesale ye-Wheledale enexabiso elihle-i-shingfong, i-shingfong ekwiSihui, i-Guingdong, ithatha i-90mins evela kwi-Guangzhou Sport Sport International Airport Sport International Airport Shoir Sport International Airport Speat isikhululo seenqwelomoya saseGuangzhou. Umzi-mveliso wethu usekufuphi ne-Guangzhou Port kunye neShenzhen Port.I-1) IKHERTFON YOKUGQIBELA I-PVC ye-cube esetyenziselwa ukukhusela kunye nokuzimela ngombane kwi-wiring kwisakhiwo okanye kwisakhiwo esingakhayo. 2) Ukuphelelwa kwe-Shingfong PVC ikakhulu kuneentlobo ezimbini: ukuvumelana okuqinileyo kunye nokuhamba okuguqukayo. I-3) Ukuhamba kwe-shingfong ye-PVC kunika ukhuseleko oluhle kubavuli abavalelweyo kwimpembelelo, ukufuma, kunye neeflethi zemichiza. I-4) IKingfong PVC Imemeti inokufakwa indawo ephantsi kwezakhiwo, izakhiwo, okanye izixhobo zokuvumela ukufakelwa kwamandla kunye neentambo zonxibelelwano. 5) Kukho izixhobo zombane eziyinjongo ezinokusetyenziselwa ukunxibelelana neyokhingfong PVC. Inqaku le-PVC 1) ifuthe kunye ne-furcine; 2) inokukhutshelwa kwikhonkrithi; 3) Ukulwa-gadalala kwaye akukho simahla kwibala lemibala; 4) I-DampPuproof, ukumelana ne-acid kunye ne-alkali; 5) kwakamsinya nje ukuphuma emlilweni, umlilo kwi-hingfong pvc iyafa kwangoko; I-6) Imilinganiselo yophawu ekhoyo; Inkonzo ye-7) yenkonzo kunye nenkonzo ye-ODM; 8) Iindidi ezimbini eziphambili: I-PVC yombhobho ethe tye, i-pvc ebandayo.
Abavelisi be-china ppp ye-china Ppp-shingfong
Abavelisi be-shingfong china Ppp I-PPR PREARDERS-SHINTFOng, i-Shingfong inabasebenzi abayi-150, siyakwazi ukugqiba ii-odolo ngexesha nje elincinci, nkqu nemfuno yokupakisha.Inzuzo: (1) Ukuxhathisa ubushushu obuphezulu: Elonaqondo lobushushu liphezulu lokusebenza lifikile kwi-70 degreees Celsius, Elonaqondo lobushushu liphezulu ukuya kwi-95 degrees Celsius. (2) Ukulondolozwa kobushushu: Ukuhamba ngenkcitho ephantsi kuphela kwe-1/1500 kuphela yombhobho wobhedu, kunye no-1/2005 wensimbi yombhobho wentsimbi. I-En-netyhefu: Akukho zivumelwano zentsimbi zinzima aziyi kugutyungelwa kukungcola okanye ukungcoliseka yibacterium. (3) Ukunganyangeki: Ukuxhathisa imicimbi yamachiza okanye i-elektroni yekhemikhali. (4) Iindleko zokufaka ezisezantsi: Ubunzima bokukhanya kunye nokukhululwa kokufakwa kunokunciphisa iindleko zokufakelwa ngama-50% ngaphezulu kwenkqubo yokuthintela isinyithi. (5) Umthamo wokuhamba okuphezulu: Iindonga ezingaphakathi zangaphakathi zikhokelela kwilahleko yoxinzelelo oluphantsi kunye nevolumu ephezulu kunemibhobho yensimbi. (6) Ubomi obude: Ngaphezulu kweminyaka engama-50 phantsi kweemeko eziqhelekileyo. (7) isebenze kwakhona kwaye inobuhlobo.
I-PVC ephezulu ye-pvc trapezoid trung
I-PVC ephezulu ye-pvc trapezoid trungUbude obusemgangathweni: 2000mm• Umbala oqhelekileyo: White• Ukubonelela ngokhuseleko olukhulu lwentambo• Ukunganyangeki okunyangekileyo kunye nokucima i-thermoplastic• Izixhobo zasimahlaInqaku• I-Adskid Iners ehlanganisiweyo kunye ne-Counter eyahlukileyo ye-Intersure inyanzelisa isigqubuthelo se-duct ayiyi kuba sifakwe okanye ngexesha lokuhluma;• Iikona ezigudileyo kunye nemiphetho engayi kukhalimela i-wiring okanye inkcenkceshelo yezandla;• Izinto ezikhokelayo ze-PVC zasimahla ze-PVC zihlangabezana ne-FORDE i-flame ihlawule imali.
Ingcali ye-pvc ye-Arc ye-Arc inabavelisi bemigangatho
Ingcali ye-11 ye-PVC ye-Arc ye-Arc inabavelisi beqela.Umsebenzi wayo ulungelelene ngokupheleleyo nomgangatho kunye nenkonzo yenkonzo.I-Shingfong PvC I-Arc ixhaswe ngumgangatho ophezulu we-tepe of Sight, esetyenziselwa umgangatho osisigxina wokulinganisa ukudlulisela, ngakumbi kwiindawo zikawonke-wonke, ezinjengezibhedlele kunye nezikhululo.Ezantsi kwe-duct ingabonwa ngeteyiphu ephithiziweyo kabini ngoko qinisa kumgangatho ngokulula.
Eyona puzzle ye-ppp kunye ne-pipe ebandayo yamanzi
Eyona nto ilungileyo yePPR kunye nomthengisi obandayo wamanzi.Le mveliso ikhuselekile ukuba isebenzise. Iveliswa ngokwemigangatho yokusela amanzi okhuseleko.1. Ukusetyenziswa ngokulinganayo nangokugqibeleleyo, ukonga amandla2. Ukuxhathisa ubushushu obuphezulu, ukunxiba ukunganyangeki, ukumelana nempembelelo3. Ubunzima bokukhanya, inkqubo esezantsi kunye neendleko zokulungisa4. Inkonzo elungileyo yobomi
I-PVC ye-PVC ihamba ngomthengisi we-commasterment
I-PVC ye-PVC intle ngomthengisi we-commasterment.Imveliso idityaniswe kumgangatho ophezulu.I-shingfong's ye-PVC ye-PVC ye-PVC I-PRONKICTATICT yinkqubo enye yokungena kwi-colong,ezinokwahlulwahlulwa ngokusebenzisa isiqwenga sokwahlulahlula ukulungiselela amandla, idatha kunye neentambo zonxibelelwano. Izikhundla zendawo yokwahlulahlulahlulahlulahlulahlulahlulahlulahlulahlulahlulo zivumela i-tordking ukuze ihlulwe ibe zizixhobo ezibini, ezintathu okanye ezine kuxhomekeke kwiimfuno zokufakwa.
I-PVC ye-PVC yePVC ye-PVC ye-Adhesive Pepe Avers
I-PVC ye-PVC ye-PVC ye-PVC ye-Adhesive Pepe.Imigaqo yoyilo yokubandakanya le miba ilandelayo. Le mithetho-siseko iquka ibhalansi yolwakhiwo kunye nembonakalo, ulungelelwaniso, umanyano, iintlobo ezahlukeneyo, isikali, kunye nenxalenye.Le tepi ye-tepe enamanzi ahambahambayo iphezulu, izinto ezibukhali zetheyiphu zingeniswa eMzantsi Korea. Kukho umbala oninzi wokukhetha, oluhlaza, luhlaza, lubomvu, njl.Sineqela lomsebenzi weetalente ukuba sibeke i-tepiting tepitive kwi-PVC Tring, sinokugqiba iimpahla ngexesha. Ngexesha elixakekileyo, siyakwazi ukuqinisekisa ngexesha lokuhanjiswa. Nxibelelana nathi ukuba ufuna i-PVC yeTriking ye-Tepe ephindwe kabini.
Eyona nto ilungileyo yePVC
Ixabiso le-pvc le-PVC ye-PVCIphuhlisiwe ngononophelo. Iqhutywa liqela le-R & D elithatha izinto ezininzi kwizinto eziqwalaselweyo njengezinto ezikhutshiweyo, i-Deacepender, i-ESD (i-ESD (i-elektrostatic), imibane, njl.I-PVC courtit ineempawu ezilandelayo:I-10mm ye-PVC, i-PVC ye-PVC, ikwasetyenziselwa ukukhanya okukhanyayo, siyibiza ngokuba yityhubhu ye-LED.16mm, kukho umbala othile ofumanekayo kumbhobho we-PVC, onjengo mhlophe, ngwevu, luhlaza, luhlaza, mnyama, tyheli, njl.I-20mm, ubungakanani obukhulu kakhulu, thengisa kakuhle kwihlabathi liphelaI-25mm, imodeli eshushu yentengiso, inezinto ezinxulumene nomdlaloI-32mm, umgangatho olungileyo40mm,I-50mm,I-60mm,Nxibelelana nathi ukuba unomdla kwimveliso yethu: Evela ngaphandle withfong.com
Umgangatho ophezulu we-tepe of Paudhes of Paudhes of DVC ovelisile abavelisi be-PVC abavela eTshayina
I-ShingFong ngokwesiko eliphezulu lomgangatho ophezulu we-tepitive ephindwe kabini kwi-PVC yomenzi weTVC ovela eTshayinaLe yiglue ekhethekileyo esetyenziselwa i-suring suring, yenziwa ngokuthambeka ngokuqinileyo ukugcina itywina endaweni.Kukho imibala eyahlukeneyo efumanekayo kwisiciko seteyiphu yokunamathela, enjengamhlophe, ibomvu, iblowu, iluhlaza, ityheli, i-orenji, i-orenji, i-orenji, ipinki, i-orenji, i-orenji, i-orenji, i-orenji, i-orenji, i-orenjiUmbala obenziwe ngokwezifiso wamkelekile.Umbala weteyipu uhlala emhlophe okanye mnyama.Ububanzi obuqhelekileyo buyimizuzu. I-7mm ukuya kuthi ga. I-85mm.Nxibelelana nathi ukuba unomdla kwiimveliso zethu: Evestingfong.cong
Le vidiyo iya kukwenza umbhobho wokwenza umbhobho we-PVC ngesokisi eqinisekisiweyo
Le vidiyo iya kukwenza umbhobho wokwenza umbhobho we-PVC ngesokisi eqinisekisiweyoKule vidiyo, ndiza kukubonisa le vidiyo iya kukwenzela umbhobho wokwenza umbhobho we-PVC ngesokisi eqinisekisiweyo. Yonwabela kwaye ubhalise le vidiyo!I-Sihui ShingFong Iprobhothi yePhepha leMveliso CO., ltd., ngumenzi wobugcisa obandakanyeka kwizinto eziphezulu zePolymer, iimveliso zalo eziphambili ze-PVC, i-PVC ye-PVC, i-PVC-U Haipes Hambisa kunye nezixhobo ezinikezelweyo ze-PVC kunye nezixhobo ezinxulumene noko.I-Shingfong yasungulwa ngo-1996, ikwi-68, i-Qingdong Road, isithili saseDongCheng, iSixeko saseDongcheng, iPhondo, iPhondo laseGuangdong, igubungela indawo yeehektare ezingama-38.8. I-SHIGFFOng ineeseti ezingama-30 zemigca yemveliso ezenzekelayo, umthamo wonyaka wemveliso ziitoni ezingama-30,000, ngexabiso lokuphuma kwe-200 yezigidi okanye ngaphezulu.I-imeyile: Evela ngaphandle withFong.comNDILANDELE:Jonga iwebhusayithi yam: https: //www.sshingfong.comI-Facebook: http: //mtww.faceboen.com/11249170635505I-YouTube: / https: //m.I-LinkedIn: http://www.lidakedin.com/in/sfv-pcukungksikipLe vidiyo iya kukwenza umbhobho wokwenza umbhobho we-PVC ngesokisi eqinisekisiweyoNceda uqhagamshelane nathi ngokukhawuleza ukuba unomdla kuwo.# ividiyo # i-pvc # upapaji # i-soker # eqinisekisiweyo # i-SFPSOCTSOCKSPOOALERGY
I-Sichui Shingfong yemveliso ye-COGFFOng Com., Ltd.
Shingfong nguvulindlela kwintambo yombane& I-wiring ye-wiring ye-wiring, umbhobho wokuhambisa, umbhobho wokuhambisa amanzi, umbhobho wokuntywila kunye ne-fipes efanelekileyo. Imiselwe ngo-1996, besithengisa umbhobho wethu we-PVC kwaye sithengise kwiidolophu ezingaphezu kwe-150 ukusuka ekhaya kwaye siphakathi ngokunyaniseka nomgangatho wemveliso ethembekileyo. Inzuzo ye-SHIGFFOng: Sizinikele ekwenzeni iimveliso eziphezulu eziphezulu kwixabiso lezoqoqosho ukuze likwazise ngakumbi kwimarike yakho. Siyavuya ukwenza iimveliso zihlangabezane neenkcazo zakho. Sinokwenza ilebheli yemveliso enokunceda igama lakho lophawu lokufumana intengiso. Uluhlu olubanzi lwenkcazo yeendlela, ezinye iitrunks A ...
IISELWE NGO-1995, i-SHFFOng inamava angama-26 amava oqeqesho kwimveliso ye-PVC yeMveliso yePVC kunye ne-PVC yendawo yePVC
Umthamo woNyaka woNyaka ziitoni ezingama-30,000, ukulayisha ubuncinci iikhonteyina ezingama-50x40GP ngenyanga
Igubungela indawo eyi-25,000 yeemitha, iindibano zocweyo ezi-2 kunye ne-3 ye-3PC imigca yokuvelisa ezenzekelayo
I-OEM / SOEDM yesiqhelo. Inkonzo yoyilo yasimahla yokupakisha yangaphandle.
Inkonzo, umgangatho kunye nokunyaniseka
I-Shingfong izibophelele ekusoloko zibonelela abathengi bayo ngeemveliso ezifikelelekayo, eziphezulu kunye nenkonzo egqwesileyo yabathengi. Iinkonzo zokumisa enye, kubandakanya nenkonzo yase-Presarives efana nongxoxo-bhanyano, uyilo lwesicwangciso sentengiso, uhlalutyo lwentengiso, emva kwenkonzo yokufakelwa, le nkonzo inikezelwa kuyo yonke inkqubo.
Intanda-bulumko ye-hingfong: ukuthembeka, ukuxhamla.
Injongo ye-Shingfong: Ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ebalaseleyo.
Iinjongo zeShingfong: Ukuhlaziywa kweShishini, ukuphucula ukusebenza kakuhle, ukuphucula abasebenzi bobomi.
Umgaqo weShingfong: Landela umgangatho wehlabathi we-ISO9001, setha kwaye uqhubeke ukuphucula inkqubo yeemveliso kunye nenkonzo.
Umenzi wobungcali ukusukela ngo-1995
I-Twin Screw Addrikers ye-PVC yeTrinking kunye ne-PVC
Faka umthwalo qho ngenyanga. I-50x40HQ yezikhongozeli
Nikeza inkonzo ye-OEM / ODM
Ngaphezulu kwe-200 yemibundu eyahlukileyo ye-OEM
I-SHCFFOng ye-PVCOng ye-PVC ye-PVC yanamhlanje yokuLawula i-China
I-Shingfong ngokwesiko le-hingfong ye-PVC ye-PVC ye-PVC yomenzi woMntu oLawulayo ovela eTshayina
I-Introto Pvc Cable Chenking Shingfong
I-Shingfong Introto Pvc Cable Chenking Shingfong
Eyona minqweno ilungileyo yomnyhadala wokutyela wayo ukusuka kumthengisi we-shingfong
I-Shingfong yeyona minqweno ilungileyo yomnyhadala we-tingfong ukusuka kumthengisi we-shingfong
I-STOPY PROOFICY PROKEALY I-WHOLESTEALE-Icui ShingFong Imveliso yeFoyini Com., Ltd.
I-shingfong ye-PVC yoMbane we-PVC ye-Phcking ye-Wightale-Sihui Shingfong Imveliso yeFoyini Com., Ltd.